Ezona mifanekiso zibalaseleyo zaseGalicia | Abadali be-Intanethi
Ababonisi ababalaseleyo baseGalicia
Iris Gamen | | Ihlaziywe 19/03/2022 00:10 | Abadlali
Kwi-panorama yaseSpain, umzekeliso uhamba ngexesha elihle, yonke indawo esijonga kuyo sibona abantu abanetalente besenza ubugcisa, inethiwekhi yoluntu, izikolo, izitrato, njl. Ilizwe lethu belisele kwaye lisaqhubeka ukuba sisiqalo setalente kwaye sifuna ukuzibonisa.
Kungumsebenzi onzima kakhulu, ukwenza ukhetho lwamagama abantu abakhokelayo kwihlabathi lemizekeliso kwaye ngakumbi ngakumbi ngomxholo esiza kuthetha ngawo namhlanje, Abazobi baseGalician. Ukusuka kwi-intanethi yokuyila, sifuna ubuchule obukhoyo eGalicia bufikelele kuzo zonke iindawo zaseSpain kwaye kutheni kungabi ngaphandle kwemida yethu.
Ubugcisa bemizekeliso busingqongile kubomi bethu bemihla ngemihla, kwaye ngamaxesha amaninzi asibunanzi, sibubona kwifashoni, uncwadi, intengiso, phakathi kwezinye. Kodwa kufuneka iqondwe loo nto Enkosi kwiintanethi zentlalo, umzekeliso kunye neengcali ziye zabetha kakhulu.
1 Abazobi baseGalician
1.1 UJulia Balde
1.2 umthi webhanana
1.3 UCelsuis Pictor
1.5 Lula Nandipha
1.6 Ewe Castillo
1.7 USergio Covelo
1.8 JANO kwezinye iilwimi
1.9 UMartin Romero
1.11 ibe lemma
1.12 UMnu Reny
Uluhlu lwemifanekiso yaseGalician lubanzi kakhulu, kangangokuba kunzima ukuthetha ngazo zonke kwisithuba esinye, ngoko namhlanje siza kukuzisa ukhetho.
Ukusuka e-A Coruña, wafunda i-Fine Arts kwiYunivesithi yase-Barcelona ngo-2006 kwaye wafumana ithuba lokufunda isemester kwiSebe leMizobo lesikolo se-MassArt eBoston. Ndiyabulela kula mava, wafumanisa ukuba umanyano phakathi kwezinto ezibonwayo ezinjengomzekeliso kunye nengxelo yiloo nto wayefuna ukuyidala.
Okwangoku, usebenza njengomzobi kunye nomfundisi-ntsapho, kwaye udibanisa zombini iinkalo kwi Iprojekthi yePin Tam Pon, apho baphuhlisa izixhobo zokufundisa ngokunxulumene nentelekelelo, imizobo kunye nemidlalo.
Umzobi emva kwegama likaLa Platanera ubizwa ngokuba nguAndrea, osuka kwiSiqithi saseArousa. Yena ichaza umzekeliso njengebhulorho ethe ngqo kwiimvakalelo kunye neyona ndlela ibalaseleyo yokubalisa amabali. Wenza iworkshop yakhe kwindlu kayisemkhulu ngoncedo lukanina, indawo yokuqhawula, umfuniselo nokufunda.
Ngokukrola, uye wazuza ubuchule bokubalisa amabali akhe, ngobugcisa be-serigraphy bestampu ngendlela yobugcisa ephepheni, kwilaphu kunye neeseramikhi.
Umzobi kunye negcisa elizimeleyo, ozalelwe e-Ourense. Umfundi wemizobo kwiSikolo soBugcisa kunye neMisebenzi yezandla. Wasebenza njengomlawuli wezobugcisa kwii-arhente ezahlukeneyo zentengiso kunye nezitudiyo eSpain, kunye naseSwitzerland, eFransi naseUnited Kingdom.
Okwangoku, uzinikele kumzobo wedwa, kunye nesitayela somfanekiso kunye nomzobo ocacileyo, uye wakwazi ukwenza uhlobo lokubonakaliswa komntu, ukuxuba i-collage kunye ne-inki yedijithali. Imisebenzi yalo mzobi inakekelwa ngokucokisekileyo, kwaye apho anika ubomi kwizidalwa ezintsha, oomatshini, njl.
UDea Gómez kunye no-Diego Omil, eLos Bravú, babiza iqoqo labo ngeli gama lesiGalicia elinxulumene nendle. Baye badibana kwiFakhalthi yoBugcisa obuLungileyo eSalamanca, kwaye kunye baye baba luphawu lwelizwe lokupeyinta kunye nobugcisa.
Besebenzisa iindlela ezahlukeneyo, la magcisa mabini ajongana neengxaki zangoku. Umsebenzi wakhe unobuntu obukhulu, obangela ukuba ahluke kwabanye abaculi. Kubo, kubaluleke kakhulu ukuqala ukusebenza kunye nemidwebo, imidwebo elula ebanceda ukuba bazi ukuba isiqwenga sibonakala njani.
I-Bravú ibonise kumaziko obugcisa ahlukeneyo afana neMatadero eMadrid, iMyuziyam yoBugcisa banamhlanje eSalamanca, Unit1 eLondon, njl.
Uzalelwe eGalicia, wafunda ubuGcisa obuBugcisa apho wayekhethe khona ukupeyinta. Kamva, ndafunda isidanga sobugqirha nesidanga se-masters kubugcisa bokuyila negraphic design nemifanekiso. Wathabatha imisebenzi yakhe kwiigalari ukuya ezitratweni, apho wayefuna ukunika imbono entsha kwigraffiti. Uninzi lwemisebenzi yalo mculi inokufumaneka kwiifomathi ezinkulu kwiindonga, apho zihambelana ngokugqibeleleyo kwindawo yasezidolophini.
Italente yakhe isasazeke kwihlabathi liphela, kwaye izenzele igama kwiminyhadala efana neendonga zaseMntla Ntshona eBelgium, iStreet Art Fair eParis, iNishimi Festival eAzerbaijan, phakathi kwezinye ezininzi.
Umsebenzi wakhe usukela kwipeyinti, umzekeliso, ukuya kwimizobo yeceramic. Indalo ngokusebenzisa iiseramics imnike uluhlu lwamathuba okudala ukunika imilo kunye nomthamo kubalinganiswa bakhe.
Isiqwenga ngasinye sihamba kunye naye undoqo wesiqu sakhe, njengomntu odlamkileyo nomnandi. Kwiprojekthi yakhe yobuqu, i-monstrous idityaniswe ngokusondeleyo nobuhle, obungaqondakaliyo kunye nedrama.
Isidanga soBugcisa, uSergio Covelo uzichaza njengomzobi, umzobi kunye nomzobi.
Imisebenzi yakhe ijikeleze Imifanekiso yeencwadi zezifundo, imultimedia kunye namabali ahlekisayo, ekugqibeleni uye wenza iimpapasho kumajelo afana neLa Voz de Galicia.
Inxalenye ebalulekileyo yomsebenzi wakhe idityaniswe kumfanekiso wemultimedia kwiwebhu, imifanekiso eshukumayo, iibhana, oopopayi, njl.
JANO kwezinye iilwimi
U-Alejandro Viñuela nguye ozimela ngasemva kuka-JANO, ophumelele isidanga kwi-Fine Arts kunye nomfundi wemizobo. Usebenze njengomzobi, umzobi kunye nomzobo kwiinkampani ezahlukeneyo. Kutshanje kugxilwe kwi umzobo ohlekisayo kunye nomfanekiso wokuhlela, ngaphandle kokuba ngutitshala kwiindibano zocweyo zokubalisa.
Idibanisa uqeqesho lwe-Illustrator, umlawuli wopopayi kunye nombhali wencwadi ehlekisayo ukuphuhlisa iiprojekthi zakho. Kwihlabathi lemizekeliso, usebenze ukusuka kwintengiso ukuya kupapasho. Umbhali wee-comics ezifana ne-Fabulous Chronicles ye-Taciturn Mouse (2011) okanye i-Debt (2017).
UNatalia Rey, okanye njengoko umama wakhe embiza ngokuba nguPirusca. Umzobi kunye nomzobi. Ufundele ubuGcisa obuhle kwaye waphela njengomyili wemizobo efunda ukuzifundisa.
I-Pirusca ibe luphawu lwakhe lobuqu malunga neminyaka eyi-10, wazalwa ngenjongo yokwenza imizekeliso ukuze uncume kwaye ukhuphe umntwana omthwele ngaphakathi.
Ukususela esemncinane, ebenxulunyaniswa nehlabathi lemizekeliso. Usebenzela iimagazini okanye iincwadi zabantwana, kunye nemifanekiso ehonjisiweyo. Ngoku usenza indawo yokuhlala yobugcisa eMaison des Auteurs de Angouleme apho asebenza khona kwicomic yakhe elandelayo.
UJavier Ramirez okanye uMnu. Reny, uzinikele kakhulu Ilizwe lemizekeliso nangona ezichaza ukuba uyakuthanda ukubhala kunye nokuyila imizobo. Kwimisebenzi yakhe, usebenzisa i-palette yombala obanzi kwaye yonke into ijikelezwe neenkcukacha ezincinci. Wenze umsebenzi kumaphulo entengiso, iikhava zeencwadi, iirekhodi zomculo, phakathi kwabanye.
Njengoko ubona, uluhlu lubonakala lungenasiphelo kwaye kunjalo, apha sikushiyele ukhetho oluncinci, ukusukela kukho amagama amaninzi ngakumbi emizobo yesiGalicia esikholelwa ukuba kubalulekile ukuwazi ukuze sonwabele kwaye sifunde kubuchule babo bomsebenzi.
Ukuba nabani na wayecinga ukuba ababonisi baya kunyamalala kunye nobudala bedijithali, babengalunganga, kwaye olu tshintsho lwexesha luthetha ukuba ukuchuma phakathi kwamagcisa azoba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ababonisi ababalaseleyo baseGalicia
Ithini imbali yelogo kaGoogle?
Imigaqo yeGestalt kuyilo lwegraphic